Myanmar Music Art | Rock
ဂျုံခင်းပေါ်မှကျီးကန်းများ Mp3 Album
Dusty Way Band ရဲ့Albumပါ…သီချင်းကတော့အကုန်ကောင်းပါတယ်…..Original အခွေကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးကြပါခင်ဗျာ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite
01 – အလင်းဖြစ်စေ
Eternal Gosh! Band က ကို Han Nay Tar ရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ ။ Download ဆွဲပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး Song Name – အပြစ်မဟုတ်ဘူး Vocalist – Han Nay Tar Band – Eternal Gosh! Favorite
Raymond ရဲ့ ဆုလာဘ်သီချင်း MTV လေးပါ အရမ်းကောင်းပါတယ် MTV ကိုအောက်ကလင့်မှာ Download ရယူပါခင်ဗျာ Favorite
ကကြိုး Mp3 Album
လေးဖြူရဲ့ဒိုင်ယာရီAlbumထဲကသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့(ယုံကြည်ရာ)သီချင်းကိုရေးထားတဲ့သူရဲ့Albumအသစ်ပါ…သီချင်းကတော့အကုန်ကောင်းပါတယ်… ပညာရေးဆိုတဲ့သီချင်းကတော့ပိုမိုက်တယ်….Original အခွေကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးကြပါခင်ဗျာ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလုပ်ရယူပါ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite
MRTV4မှာပြသနေတဲ့ (၀င်္ကပါစံအိမ်) မြန်မာရုပ်သံဇတ်လမ်းတွဲမှဇတ်ဝင်တေးသီချင်းသုံးပုဒ်ပါ…… အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းယူပါ Favorite
Original အခွေကိုဝယ်ယူအားပေးရင်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောအဆိုတော်ကိုကူညီပါခင်ဗျာ Padamyar Radio To Live2Album ထဲက G-Fatt နဲ့Phyu Phyu Kyaw Thein တို့စုံတွဲသီဆိုထားတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်…အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလိုက်ကြပါအုံး အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite
စိုးသူရဲ့အမြတ်နိုးဆုံးမင်းအကြောင်းလေး Albumကိုအောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ စာသားပါထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Favorite